Qubanaha » Koox ka dhisan wadanka Germalka oo ceyrisay Ciyaarayahan lacag sadaqo ah u so diray Soomaaliya.
Koox ka dhisan wadanka Germalka oo ceyrisay Ciyaarayahan lacag sadaqo ah u so diray Soomaaliya.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka Germany Bundesliga ee lagu magacaabo DARMSTADT ayaa waxay si rasmi ah u xaqiijisay inay iska fasaxday xiddiga ka ciyaara qadka dhexe ee u dhashay dalka Tunisia laguna magacaabo Anis Ben-Hatira.
Kooxda DARMSTADT waxay xaqiijisay inay madaxda kooxda iyo xiddigaan qadka dhexe Anis Ben-Hatira isku afgarteen in la burburiyo heshiiska uu kooxda kula joogo ka dib markii uu dhaleeceyn xoogan kala kulmay warbaahinta Germany.
Arrinta ugu yaabka badan ayaa waxay tahay in Anis Ben-Hatira uu shaqadiisa ku waayey Sadaqo Islaami ah oo uu bixiyey, waana ciyaaryahan mushaarkiisa sadaqo ka baxsada sidoo kalena dhiiba Sadaqada ay Diinteena Suuban ee Islaamku ku waajib yeeshay. Arrintaas darted ayaana lagu qabsaday Anis Ben-Hatira.
Anis Ben-Hatira wuxuu dhaleeceyn badan kala kulmay warbaahinta Germany maadaama uu Samafal Islaami ah si joogto ah u bixiyo, waxaana ninkaan lagu tilmaamay Islmaan xagjir ah.
Ben-Hatira ayaa lacagaha uu bixiyo waxaa loogu gargaaraa dadka ku tabaaleysan Syria, Somalia iyo Palestine si la mid ah Afghanistan, waxaana uu lacagahaas u marsiiyaa hayado Islaami ah.
Anis Ben-Hatira ayaa daaha ka qaaday in aysan wax dhibaato ah ula muuqan inuu shaqadiisa ku waayey gargaarka uu u fidiyey dadka Islaamka ah ee tabaaleysan.
Kooxda DARMSTADT waxay ku jirtaa kaalinta 18aad ee ugu dambeysa Bundesliga iyadoo leh 9 dhibcood oo keliya.